Maareeyihii dekadda Kismaayo iyo dad kale oo caawa lagu dilay Kismaayo - Caasimada Online
Home Warar Maareeyihii dekadda Kismaayo iyo dad kale oo caawa lagu dilay Kismaayo
Maareeyihii dekadda Kismaayo iyo dad kale oo caawa lagu dilay Kismaayo
Kismaayo (Caasimada Online) – Wararka aan caawa ka heleyno magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxay sheegayaan in lagu dilay Maareeyihii dekadda magaalada Kismaayo Cawil Cali Barre iyo laba qof oo kale.
Dadkaas ayaa ku dhintay is-rasaaseyn gudaha magaalada ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan maamulka Jubbaland, sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen xubno ka tirsan maamulka Jubbaland.
Is-rasaaseynta ayaa ka dhacday isgoyska Golol oo u dhaw taalada weyn ee magaalada, waxayna u dhaxeysay ciidamo ka kala tirsan Nabad sugidda Jubbaland oo halkaas bar control ku leh iyo kuwa ilaalada madaxtooyada oo wadada isku deyey inay xoog ku maraan.
Labada ciidan ayaa is weydaarsaday rasaas mudo daqiiqado ah socotay, waxaana ku dhintay dad uu ka mid yahay Maareeyihii dekadda Kismaayo Allaha u naxariistee Cawil Cali Barre, kuwaas oo ay rasaastu ugu tagtay xaafadahooda.
Sidoo kale waxaa jira khasaare kale oo soo kala gaaray ciidamadii dagaalamay, in kastoo aan weli la xaqiijin inta uu dhanyahay, hadana dadka noo waramay waxay noo xaqiijiyeen dhaawaca hal askari oo ka tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada Jubbaland.